Home Wararka Xisbiga Himilo Qaran oo la saftay Farmaajo, sheegayna in ciidan Itoobiyaan ah...
Xisbiga Himilo Qaran oo la saftay Farmaajo, sheegayna in ciidan Itoobiyaan ah joogin DH/Mareeb
Xildhibaan C/xakiin Maalin oo ah Xoghayaha Xisbiga Himilo Qaran oo qeyb ka ah Madasha Xisbiyada Qaran ayaa warbaahinta u sheegay in magalaada Dhuusamareeb ayan joogin ciidan ka socda dalka Itoobiya isla markaana dowlada Fedaraalka oo kali ah gacanta ku hayso amniga magalaada Dhuusameeb.
Hadalka ka soo yeeray Xoghayaha Xisbiga Himilo Qaran ayaa soo baxay saacado ka dib markii Madasha Xisbiyada Qaran oo uu hogaamiyo madaxa Xisbiga Himilo Qaran Shiikh Sharif ay sheegeen in Ciidamo Itoobiyaan ah ay joogaan Magaalada Dhuusamareeb.
Waxaa dad badan la yaabeen mowqifka is buriyana ee ka soo yeeray hogaanka Xibiga Himilo Qaran. Waxaa sidoo kale Muuqanayasa in Xisbiga Himilo Qaran uu wali ku milan yahay dowlada Fedaraalka, iyaga oo dhanka kala wada wata hal Musharax.
Dowlada Farmaajo ayaa teegeersan isla markaana wadata Musharax Axmad Qoor Qoor, dhanka kale waxaa isla musharxaaas isna u ololeeyna Madaxweynehii hore Shiikh Sharif iyo Xisbiiga Himilo Qaran! Sidee shacabka Soomaaliyeed kalsooni u siin karaa ama u rumaysan karaa aragtida Xisbi u muuqda in uu doonayo in uu qayb ka noqdo dhowr kooxooed oo isdiidan.